🥇 ▷ Samsung: Taasi Galaxy Fold 2 waa inay ahaataa mid kayar oo ka jaban ✅
Samsung: Taasi Galaxy Fold 2 waa inay ahaataa mid kayar oo ka jaban
Odyssey ee Samsung Galaxy Fold wuxuu rajeynayaa inuu si dhakhso ah u dhammaado. Bisha Sebtembar isku laabma waa inuu ugu dambeyntii muuqdaa. Sida laga soo xigtay ilo gudaha ah, Samsung ayaa durbaba ka shaqeyneysa badal kaas oo si weyn uga duwanaan doona.
Motorola waxay qorsheyneysaa inay dib u soo nooleyso xilligii taleefannada flip-ka ah ee Moto Razr 2019, laakiin sida iska cad iyagu maahan kuwa keliya ee leh fikradan. Insiders wuxuu u sheegay Bloomberg in xitaa Samsung ay ku shaqeyneyso taleefan casri ah oo lagu dhejin karo labajibaarane yar. Isku laabma, shaashaddu waa inay lahaataa mid cabbirkeedu yahay 6.7 inji, oo la mid ah tan Galaxy A90 5G. Si kastaba ha noqotee, siideynta aaladda cusub sidoo kale waa inay ku xirnaataa sida guusha Galaxy Fold uu u noqdo.
Oggolaanshaha suurtagalnimada Galaxy Fold 2 | (c) Samsung
Marka lagu daro qaab cusub oo loo adeegsado isku-laabashada, taleefanka casriga ah sidoo kale waa inuu noqdaa mid cidhiidhi ah oo aad loo maareyn karo. Galaxy laab waa mid aad u qaro weyn marka loo eego taleefannada casriga ee caadiga ah, gaar ahaan markii la laalaaday, taas oo dhib ka dhigeysa marka aad jeebkaaga gashato. Sidoo kale, kamaradda selfie waxay heshay dib u habeyn waana inay ku timaadaa naqshad dalool leh, sida horeyba ugu jirtay Galaxy S10 iyo Galaxy Note 10. Ka dib waxaa jira laba kamaradood oo banaanka ah, laakiin ma jiraan faahfaahin dheeraad ah oo tan ku saabsan. Patent suurto gal ah ayaa horey loo helay, laakiin tani waxay u muuqataa xoogaa ka duwan.
Waxaa laga yaabaa in qaabkan cusub guud ahaan uu ugu fiican yahay isku laabmayaasha. Aaladaha horey loo shaaciyey waxay umuuqdeen kuwa ka hooseeya xiddig wanaagsan. Huawei Mate X ayaa dib loo dhigay illaa bisha November, Roxole Flex Pai wuu ku adkeystay inuu tijaabiyo tijaabada Samsung Galaxy Fold waxay masiibo u aheyd Samsung. Had iyo iyo marka qalabka isku laabma ee ka socda Xiaomi ama Oppo ay gaaraan suuqa sidoo kale gabi ahaanba ma cadda. Illaa iyo hadda, ma jiro mustaqbal cad oo loogu talagalay dadka isku laabma waxna soo saarayaasha qaar ayaa isku dayaya inay naqshadeeyaan tikniyoolajiyadda cusub. Laakiin kaliya qiimaha ayaa wali caqabad ku ah macaamiisha badan, gaar ahaan, marka laga reebo cabbirka muujinta wax qiima ah oo muuqda oo muuqda ma muuqato.